एमाले र राप्रपा नेपालबीच गोप्य सहमति, कमल थापा परराष्ट, कुन्ती शाही स्थानीयमा निश्चित – YesKathmandu.com
काठमाडौं, २३ असोज । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भएका छन् । एमालेसँग भएको सहमति अनुसार परराष्ट्र स्थानीयसहित ३ मन्त्रालय राप्रपा नेपालले पाउने भएको छ ।
राप्रपा नेपालबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानसहित परराष्टमन्त्रीमा कमल थापा जाने भएका छन् भने स्थानीय विकासमन्त्रीमा कुन्ती शाही जाने भएकी छिन् । त्यसैगरी अर्काे एक मन्त्रालय पनि राप्रपा नेपालले पाउने भएको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री समर्थन दिने गोप्य सहमति भएलगतै मन्त्रालयको पनि बाँडफाँड भएकोे राप्रपा नेपाल स्रोतले बताएको छ । एमाओवादी र राप्रपाको समर्थन पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ ।
राप्रपा नेपालले भारतको एसम्यान भन्दा बाहिरको सरकार बन्न लागेका कारण एमालेलाई समर्थन गरी सरकारमा जाने आन्तरिक निर्णय गरेको हो ।
उता नेपाली कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्धार बनाउने निर्णय गरेको छ । कोइरालालाई मधेसी दल र भारतको सहयोग छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एमाओवादी, राप्रपा नेपाल लगाएत साना दलको समर्थन रहेको छ ।
pakriya pura garera .chadai desh lay nikas paus..
Aba Bhanne Sarkar Lay yo yeuta kura ma ramro sanga Bichar …..pugaus .ki mathi ko naka lai pani sucharu rakhi utabaat pani sabai thok ko bepar hoss .
अोली प्रधानमन्त्री भयाे भने के मधेशकाे माग संवाेधन हुन्छ र ? सायद हुदैन हाेला ।